एकन्तवासको बारेमा के भन्छ हाम्रो पुराण ? जरुरी छ जीवनमा ? - Yohosamachar
आइसोलेसन अर्थात एकान्तवास । चिकित्सा विज्ञानले अपनाएको अहिले अपनाइरहेको यो विधी हाम्रो समाजमा सदियौंअघि पनि प्रचलनमा थियो ।
अहिले जसरी हाम्रा पूर्खाहरु एकान्तवासमा बस्ने गर्थे । पुराणहरुमा पनि एकान्तवासको महत्व बताइएको छ । तर, यो स्वेच्छिक हुनुपर्छ । अर्थात व्यक्तिले आफ्नो इच्छाले एकान्तवास बस्छन् भने त्यो सुखदायी हुन्छ ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह :
← पारिवारिक स्वास्थ्यका लागि : भान्सामा भाँडावर्तन
ब्रत एवं उपवास : कसरी मिल्छ लाभ ? →
April 8, 2020 May 13, 2020 योहो समाचार	0